Mitemo Yekushandisa - Jesson Mureza Arts & Crafts Co., Ltd.
Kugamuchirwa ku www.China-Flag-Makers.com. Isu tinopa webhusaiti yedu sevhisi kune vatengi vedu. Ndokumbirawo kuti muverenge aya maMitemo neMamiriro zvakanyatsonaka. Iyi Mitemo neMamiriro zvinotonga kuwana kwako uye kushandisa kweChinaChinaFlag-Makers.com.
Hatimboite kero yako ye-e-mail uye nerumwe ruzivo rwakavanzika kuti ruwanikwe kune imwe kambani kana sangano pasina mvumo yako. Kana iwe ukatipa isu neako kero yepositi, iwe unogona kugamuchira nguva nenguva tsamba dzemashoko neruzivo rwezvigadzirwa zvitsva nemasevhisi kana zviitiko zviri kuuya. Kana iwe usiri kuda kugamuchira tsamba dzakadaro, ndapota tiudze isu nekutumira e-mail, kufona kana kutinyorera isu pa sales@china-flag-makers.com.
Kana iwe ukaona kuti yako haina kutumirwa kune yako yakatarwa kero, ndapota taura nesu uye vedu vatengi revatengi vanozobata iyo logistics kambani mukati me24H uye voitumirazve iyo kune yekutanga kuenda. Nekudaro, China-Mureza-Vagadziri vanovimbisa kudzoreredza iro basa rekudhinda uye ndokuendesa kune yako yakatarwa kero kana yedu yekuita nguva yapfuura 24H, mahara.
China-Mureza-Vagadziri vane mifananidzo, mifananidzo, mifananidzo, zvinyorwa zvinyorwa, mifananidzo, zvinyorwa, mafonti, maturusi esoftware, uye rumwe ruzivo (runotaurwa pano se "Zvemukati"). Iyi Saiti uye Zvese zvirimo zviri zvine copyright chivakwa cheChina-Mureza-Vagadziri. Kodzero dzose muSiti ino uye zvirimo zvirimo zvakachengetedzwa pasirese. Izvo zvinorambidzwa zvachose kuchengetedza iyo kopi, kugovera, kutsikisa, kana kushandisa chero chikamu cheChinhu kunze kwekunge zvakabvumidzwa zviri pachena muMitemo neMamiriro aya. China-Mureza-Vagadziri vanochengetera kodzero yekuwedzera, kudzima, kana kugadzirisa chero chikamu cheChinhu chero nguva chero nguva zvisati zvaitika.
Nekuwana kana kushandisa www.China-Flag-Makers.com unobvuma kusungwa neMitemo neMitemo yese uye nemimwe mirayiridzo, zvirambidzo, kana mitemo inogona kutumirwa zvine chekuita nezvimwe zvikamu kana masevhisi ewebsite ino. China-Mureza-Vagadziri vanochengetera kodzero yekuita shanduko kune ino Saiti uye kune aya maMitemo nemamiriro chero nguva pasina ziviso isati yaitika. Kuenderera mberi kwekushandisa kwako Saiti iyi uye uye kuchaonekwa sechibvumirano chako kuti chisungwe nechero shanduko dzakadai, shanduko kana kugadzirisa.
Unobvumawo kuti tinogona kupa zvese zviri pamutemo kutaurirana uye zviziviso kwauri zvemagetsi nekuzvitumira pa www.China-Flag-Makers.com kana, pasarudzo yedu, nekutumira e-mail kukero ye-e-mail yawakatipa. pawakanyoresa pawebhusaiti yedu. Unogona kubvisa mvumo yako yekugamuchira kutaurirana kubva kwatiri zvemagetsi nekutitumira tsamba paemail sales@china-flag-makers.com. Nekudaro, kana iwe ukabvisa mvumo yako kuti ugamuchire kutaurirana kwedu nemagetsi, unofanirwa kurega kushandisa kwako account yako pa www.China-Flag-Makers.com.